Ungazi kanjani ukuthi uvinjelwe ku-WhatsApp 2019 | Izindaba zamagajethi
Ungazi kanjani ukuthi uvinjelwe ku-WhatsApp 2019
URafa Rodríguez Ballesteros | | Aplicaciones, WhatsApp
Impela lokho I-100% yalabo abafunda lokhu okuthunyelwe, futhi uma kungenjalo, bajwayele ukusebenzisa uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo ngobuhle, WhatsApp. Uhlelo lokusebenza olushintshe indlela esisebenzisa ngayo omakhalekhukhwini bethu kusuka emini kuye ebusuku.
Uhlelo lokusebenza quintessential imiyalezo okwamanje iyindlela ejwayelekile kunazo zonke yokuxhumana komhlaba. Kakhulu kangangokuba nUlimi lwakho luzivumelanise nalo kwaze kwaba sezingeni lokuhlanganisa isenzo liphefumulelwe yiWhatsApp, «Whatsapping». Futhi ukusetshenziswa kwayo kubangele namanani ezinkampani ezinikezela ngocingo kanye nezinsizakalo zokuxhumeka kwe-inthanethi ukuthi zishintshe ngokunikeza amaphakheji wedatha akhethekile.
1 I-WhatsApp ayisazisi uma sivinjelwe
2 Izinkomba zokwazi ukuthi ngabe zisivimbele ku-WhatsApp
3 Ngakho-ke uzokwazi ngokuqinisekile uma uvinjelwe ku-WhatsApp
3.1 Zama ukuyingeza eqenjini
3.2 Izinkinga zokwenza ikholi yezwi
I-WhatsApp ayisazisi uma sivinjelwe
Sikuthatha kalula lokho Uma ufinyelele kulokhu okuthunyelwe kungenxa yokuthi ungumsebenzisi we-WhatsApp. Kuyinto okujwayelekile kakhulu uma une-smartphone. Namuhla sizokutshela wazi kanjani ukuthi ngabe othile ukuvimbile kuWhatsApp. Yize kungabonakala kungajwayelekile kuwe, ukuvinjelwa ku-WhatsApp ngomunye umsebenzisi okuthile okuvame kakhulu kunalokho esingakucabanga.
Kuyindlela ethokozisayo endaweni enjalo yezobuchwepheshe bezokuxhumana. Singacabanga ngezizathu eziningi zokuthi kungani umsebenzisi angavimba omunye. Futhi leyo WhatsApp inayo le nketho iyaziswa. Kulungile ukwazi ukuvimba omunye umsebenzisi ngaphandle kokunikeza izincazelo ngisho nomuntu esimvimbile.
Iphuzu ukuthi singavinjelwa abasebenzisi abaningi ngaphandle kokwazi. Ukusetshenziswa kwe I-WhatsApp ayisazisi ngokusemthethweni lapho umsebenzisi wethu evinjelwe nganoma yimuphi omunye. Ngakho-ke, ngaphandle kokuthi omunye umsebenzisi akuqinisekise ngokusobala, ngeke sikwazi ukwazi.
Kepha noma ngabe iWhatsApp ingasazisi kukhona "amaqhinga" okumele wazi. Ngokwenza izivivinyo ezithile singathola ukuthi ngabe othile usivimbile yini. Bangu izindlela ezahlukahlukene zokuhlola ukuthi umsebenzisi wethu we-WhatsApp unohlobo oluthile lwemikhawulo. Empeleni, iqiniso lokuthi inombolo yethu ivinjiwe akusivimbi ekuthumeleni imiyalezo kunoma yimuphi umsebenzisi othize.
Izinkomba zokwazi ukuthi ngabe zisivimbele ku-WhatsApp
Phakathi kwezinye izinto, singabona ukuthi ngemuva kokuthumela imiyalezo koxhumana naye othize, asitholi mpendulo angikaze. Kuyamangaza futhi lokho isimo sokuxhuma "Ku-inthanethi" asikaze sivele koxhumana naye. Futhi yize zombili kungaba umphumela wenhlanhlaKuya ngezinga lokuphikelela, kuyamangaza impela.
Ngokufanayo, kungenzeka ukuthi asikwazi ukubona ngemuva komyalezo othumele isheke elidumile elihlaza okwesibhakabhaka. Akuzona izimpawu ezichazayo, ikakhulukazi ngoba siyazi ukuthi kungenzeka ukuthi umamukeli akayifunde ngempela noma ukuthi abafuni noma bangaphendula ngaleso sikhathi. Yize kunenye futhi incazelo yalokhu.
Njengoba sazi, lesi sizathu sokugcina akudingeki sihambisane nokuvinjelwa. Phakathi kokuningi izinketho zokusetha imenyu okunikezwa yiWhatsApp yisigaba Ubumfihlo. Kusuka lapha singenza kusebenze noma singasebenzi "isiqinisekiso sokufunda" yemilayezo etholakele, noma ngabe siyifundile. Yize kufanele sazi ukuthi ngale ndlela ekhutshaziwe akekho ozokwazi ukuthi sifundile yini umyalezo wakho. Kepha ngokufanayo, thina ngeke sikwazi ukubona isheke elihlaza okwesibhakabhaka engxoxweni yethu futhi.
Kukhona ezinye izinketho ezingaholela ekudidekeni okufana ne- ukungakwazi ukubona isikhathi sokugcina sokuxhuma. Okungukuthi futhi ingashintshwa kusuka kumenyu efanayo yobumfihlo. Noma yini isithombe sephrofayela mayelana noxhumana naye esisolayo ungalokothi ubuyekeze, noma vele unyamalale. Njengoba sibona, okuthile akudingeki ukuthi kube umkhuba. Impela sonke sinabo oxhumana nabo abavuselela iphrofayili yabo ye-WhatsApp cishe nsuku zonke, noxhumana nabo abaqhubeka naleyo ababeyibeka eminyakeni eyedlule.
Kepha kukhona ezinye izinhlobo zemikhondo ezizoholela esiphethweni esithembeke ngokwengeziwe ukuthola ukuthi sivinjelwe yini omunye umsebenzisi. Izimpawu ezichazayo esizothola uma sizama ukwenza okuthile ngaphandle kokuthola umphumela ojwayelekile. Ukususa noma ikuphi ukungabaza, ungazama okukodwa esikutshela ngakho ngezansi.
Ngakho-ke uzokwazi ngokuqinisekile uma uvinjelwe ku-WhatsApp
Zama ukuyingeza eqenjini
Olunye lwezivivinyo ezicace bha ukwazi ukuthi umsebenzisi wethu uvinjelwe yini zama ukuyifaka eqenjini. Uma singabaphathi beqembu, singangeza oxhumana nabo abaningi kulo. Sesiyazi ukuthi kulula kanjani ukufaka oxhumana nabo oyedwa noma abaningi eqenjini, inqobo nje uma sinendima yomlawuli. Noma kube lula kakhulu, singenza isivivinyo ngokwakha iqembu futhi sizame ukufaka oxhumana naye esisola ukuthi usivimbele.
Okujwayelekile, uma konke kuhamba kahle, kunjalo I-WhatsApp engeza kulo oxhumana naye eqenjini elidaliwe. Futhi uvele njengomhlanganyeli omusha kuyo. Ukuze uma uhlelo lokusebenza lusikhombisa umlayezo oshoyo "Kuvele iphutha" o "Awunagunya lokungeza kulo oxhumana naye" into icacile, bakuvimbele ku-WhatsApp.
Ekuqaleni inqobo nje uma kungekho mkhawulo noma ukuvinjelwa, futhi noma ngabe kungasikhathaza kangakanani, noma yimuphi umsebenzisi angangeza omunye eqenjini leWhatsApp. Ukuhlala kuwo, noma cha, sekuvele kuyisinqumo sethu. Kepha uma singakwazanga ukufaka oxhumana naye eqenjini, kungenxa yokuthi lowo oxhumana naye akafuni. Isizathu esingenakuphikwa sokwazi ukuthi umsebenzisi wethu uvinjelwe yilowo ikakhulukazi.
Izinkinga zokwenza ikholi yezwi
Yize lesi sizathu hhayi amaphesenti ayi-XNUMX okupheleleUkuzama ukwenza ikholi yezwi koxhumana naye esicabanga ukuthi ukwazile ukusivimba nakho kungasihola. Sithi akusona isivivinyo esinokwethenjelwa ngokuphelele ngoba uma umuntu esimshayelayo engenakho ukumbozwa ngaleso sikhathi kujwayelekile ukuthi ucingo lungasebenzi. Kepha uma iWhatsApp ingasivumeli ukuthi sishayele umsebenzisi othile, kungenzeka ukuthi basivimbele.
Kungakho lolu vivinyo, lusiholela esiphethweni esichazayo, kufanele sikwenze izikhathi ezingaphezu kwesisodwa. Futhi ukuze ukwenze kuthembeke nakakhulu, zama ukushaya ucingo lapho sazi ukuthi oxhumana naye esisola ukuthi siyamazi kungenzeka ukuthi unendaba. Uma ngabe wenze noma yikuphi kwalokhu kuhlolwa, noma konke, futhi awukwazi ukuxhumana noma amasiginali acacile, kungenzeka ukuthi uvinjelwe ku-WhatsApp.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » WhatsApp » Ungazi kanjani ukuthi uvinjelwe ku-WhatsApp 2019
I-Amazon inikezela ukugubha intwasahlobo (28-3-2019)
Intwasahlobo iqala e-Amazon ngalezi zinhlinzeko ezinhle (27-03-2019)